မယ်လိုဒီမောင်၏ ငြိမ်းချမ်းသံစဉ်: ကောက်ရိုးမီးလေလား... ဖွဲမီးလေလား..
ဒီရက်ပိုင်း ဘာတွေခံစားမှန်းတောင် မသိတော့ဘူးကြေကွဲတယ် ပေါက်ကွဲတယ်စိတ်တွေရှုပ်ထွေးနေတယ်တန်းပလိတ်ကိုလဲ လျှောက်ကလိတယ် ထည့်ချင်တာတွေထည့်တယ်အရူးမီးဝိုင်းလို့ပြောလဲ ကိုယ်တိုင်အရူးဖြစ်ဦးမယ်ပြောချင်ရာတွေလျှောက်ပြောနေမိတယ်ရေးချင်ရာတွေလျှောက်ရေးနေမိတယ်စိတ်ထဲရှိရာ...ပြီးတော့ စိတ်ကူးပေါက်ရာလက်ထဲကိုင်ထားတဲ့ ဖုန်းဖြစ်ဖြစ် ဘာဖြစ်ဖြစ် မကြာခဏလွတ်ကျတယ်ဟိုဝင်တိုက် ဒီဝင်တိုက်တာလဲ အကြိမ်ပေါင်းမနည်းအကြားအလပ်မရှိတဲ့ ကြမ်းပြင်နဲ့တံခါးကြားမှာ ညာဘက်ခြေချောင်းတွေအကုန်ဝင်ပြီး ညပ်သွားတယ်(နာမှန်းသိတဲ့ခံစားမှုကလွဲရင် ဘာဒဏ်ရာမှ မကျန်ခဲ့ပါလား ထူးပေစွ)မနေ့က သတိရလို့ သေချာကြည့်တော့ အဲဒီအကြားအလပ်လေးက ဖိတ်စာကဒ်၊လိပ်စာကဒ်တခု ညပ်သာရုံ ပြောမယ်ဆိုရင် အရပ်ရှည်တဲ့မော်ဒယ်ပုရွက်ဆိတ်တောင်မလွတ်လောက်ဘူး။ ဘယ်လိုညပ်မှန်း စဥ်းစားဖို့ဥာဏ်မမီဘူး။ ဟူးးးးးတရားနဲ့ဖြေ၊ စိတ်လျှော့ဆိုတော့လဲ သတိလေးကပ်အောင် ဘုရားလေးရှိခိုး ခြောက်ပါးသီလလေးခံအော် .. ငါးပါးသီလ ဟုတ်တော့ဘူး သိလားခေတ်သစ်စောင့်ထိန်းရမှာက ခြောက်ပါးသီလဖြစ်သွားပီတစ်ပါးတိုးတယ်“အီလက်ထရွန်းနစ် ဝေရမဏိ သိက္ခာပဒံ သမာဒိယာမိ”မြန်မာအနက်ပြန်ရင် ထောင်အနှစ် ၂၀ကျော် စီရင်ချက်ကျခံနိုင်စေသော လျှပ်စစ်ပစ္စည်းများကို ကိုင်တွဲအသုံးပြုခြင်းမှ ရှောင်ကြဉ်ခြင်း သိက္ခာပုဒ်ကို ခါးဝတ်ပုဆိုးကဲ့သို့ မြဲမြံစွာ စောင့်ထိန်းပါ၏ တဲ့။(ဖုန်းတို့ ဓာတ်ခဲတို့ပါမပါတော့ အတည်ပြုချက်ဘယ်သူနဲ့ယူရမှန်းမသိသေးဘူး)လူ့ပြည်မှာ သူကလူသတ်မှုထက် အပြစ်ပေးခံရတာများတယ်မတော်လို့ သေလွန်ပြီးနောက်မှာ ပါဏာတိတို့ထက် ငရဲမှာ နှစ်ကြီးမှာ စိတ်ပူရတယ်လေ ဟုတ်ဘူးလား..အားးးးးးးးးးးးးး စိတ်ရှုပ်လိုက်တာဘာတွေရေးမိပြန်မှန်းမသိတော့ဘူးခွင့်လွှတ်ကြပါဗျိုကောက်ရိုးမီးလို ၀ုန်းကနဲတောက်ပြီးငြိမ်းတဲ့ တခဏတာခံစားချက်မျိုးဆိုရင်လဲ စိတ်တွေတည်ငြိမ်သွားအောင်တော့ အချိန်ပေးရဦးမယ်ဖွဲမီးလို တမြေ့မြေ့လောင်ကျွမ်းနေတဲ့ တနုံ့နုံ့ခံစားချက်မျိုးဆိုရင်လဲ ဒီဘ၀မှာ နှစ်၂၀ကျော်တော့ မစတေးချင်ဘူးဗျာအိုးးးးး ကောက်ရိုးမီးလေလား ..ဖွဲမီးလေလား...ကိုယ်ကိုယ်တိုင်တောင် မသိတော့ပါလား...
ခံပြင်းတယ် အမရယ်.. တော်တော်လည်း ခံစားရတယ်.. ၀မ်းလည်းနည်းတယ်.. ဘာမှကို မပြောချင်တော့ဘူး
Read this. http://khinoomay77.blogspot.com/2008/11/nature-of-man.htmlOthers enjoying their life. I still dont know what your problem is.
ဒီကလေးမကြည့်ရတာ သိပ်အခြေအနေမကောင်းဘူး။ Language ပြောင်းသွားလို့လား။ ဒါမှမဟုတ် Platform ပဲ လွဲသွားတာလား။ တစ်ခုခုပဲ။ သတိပေးရဦးမယ်။ “ဒီဗလော့ပါ” ဘာညာနဲ့ သူများမြှောက်ပေးတိုင်း မာန်မတက်နဲ့။ တကယ်တော့ မိုးထဲလေထဲရောက်ရင် အိုင်တီလက်သမားလေးတွေရဲ့ ဘ၀က ဒီလိုပဲ။ စိတ်လျှော့။ အိပ်ရေး၀၀အိပ်။ နောက်တစ်ခါဆို MRT ပေါ်က ပြုတ်ကျမယ်။
အညတြ (ခေတ္တ နယူးယောက်ခ်)
လေး စား ပါ တယ် ဗျာ။ ခြောက် ပါး သီ လ လေး စောင့် ထိန်း နိုင် လို့။ အ ရမ်း စိတ် ရှူပ် နေ ပုံ ပါ ပဲ။